VMWare version 6.5 — MYSTERY ZILLION
VMWare version 6.5
I want vmware workstation 6.5 version with crack file. Please help me as soon as you can. Thanks.:77::77::77:
VMware က ကျနော်တော့ ကီးကို free ရတယ်ဗျ။ ရီဂျစ်စတာလုပ်ရုံလေးဘဲ။ ပိုက်ပိုက်ကုန်၀ူး။ ပီးတော့ ကျနော်သုံးတာ server version ပါ။ ရီဂျစ်စတာလုပ်ကြည့်ပါ။ ရမှာပါ။ မရရင်တော့ ကျနော် တင်ပေးပါ့မယ်။ :106::39:
ဟီး မှားတွားလို့။ workstation ကတော့ Free ပေးမယ် မသိလို့ စမ်းကြည့်နေတယ်။ သူ့ site မှာတော့ Trial လို့ပြောထားတယ်ဗျ။ ရအောင်လုပ်ပေးမယ်နော်။
:p:p :39::39: :68: :101::101::101:
အောက်မှာ တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပေးပါ.. တင်ထားပြီးသားရှိပါတယ် .. သူ့က အပိုင်းလိုက်ပိုင်းပြီးတင်ထားတာပါ ..အားလုံးကို Download ဆွဲပြီးမှ rar ဖြည်လို့ရပါလိမ့်မယ်.. အားလုံးစုလိုက်ရင် ဖိုင်ဆိုဒ်က 465 MB လောက်ရှိပါတယ်.. Full version လို့တော့ ပြောတာပါဘဲ.. အပိုင်းတစ်ပိုင်း ရဲ့ဆိုဒ်က 95 MB လောက်စီရှိပါတယ် .. Mediafire ဆိုတော့ အဆင်ပြေမှာပါ.. အပေါ်ဆုံးကနေ အောက်ဆုံးထိ(5)ပိုင်း အစဉ်အလိုက် ဆွဲရမှာပါ ကြားကနေဖေါက်ပြီးဆွဲရင်လည်း ရတယ်..
အသေးစိတ်ကတော့ ဒီမှာ ကြည့်လိုက်ပါဦး
VMware Server2for Windows A25A5-F6D85-V963L-4V3CJ
VMware Server2for Linux AAJA5-FDW20-U4QG7-4HLLJ
VMware Workstation6(Windows) A0203-MWZ3D-G17FP-40MRJ
ဟုန်းပေ့ချ် လင့်က www.vmware.com
ဒေါင်းလုပ်လင့်က တော့ ရက်ဂျစ်စတာလုပ်မှ ရမှာမို့ ဆန့်စပေ့ကနေ ပြန်တင်ပေးမယ်
Bro I have virtual box If you want i can give you as soon as possible.:D:D:D
I have vmware 6.5 with crack. if you want i will send to you by mypyone with CD:D. it is more efficient way for home land. :P:P